Ostriya - ALinks
Uyifumana njani i-visa eOstriya?
January 9, 2022 UAntika Kumari Ostriya , ivisa
Ukutyelela iAustria ngayo nayiphi na injongo, nokuba kungenxa yezoKhenketho okanye isifundo okanye umsebenzi. Kuya kufuneka ube nokufumana i-visa ukuba awungommi wase-Austria. Nazi ke ezinye iingongoma ukuze ufake isicelo
January 6, 2022 UAntika Kumari Ostriya , imali
I-Austria lelinye lawona mazwe atyebileyo e-euro. Kwaye inkqubo yebhanki yelizwe nayo iyaphumelela, kwaye iyahlangabezana nemigangatho yehlabathi. Amasebe eBhanki macala onke kumazwekazi amakhulu. Kukho iibhanki ezingama-700 e-Austria ezibandakanya iibhanki ezidibeneyo, iibhanki zorhwebo,
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko e-Austria? Iimbacu eOstriya
January 6, 2022 UKaruna Chandna Ostriya , ababaleki
Kwimeko apho umntu esoyika ukubuyela kwilizwe lakhe. Okanye indlu yokugqibela ayinakubalwa. Kuba usengozini yokufumana into embi. Unokufumana ukhuseleko e-Austria. Inyathelo lokuqala lokufumana ukhuseleko yile
Ungawufumana njani umsebenzi eOstriya? Isikhokelo esikhawulezayo sabasemzini kunye nabemi baseAustria
Disemba 20, 2021 UAntika Kumari Ostriya , imisebenzi
Ukusebenza e-Austria kunokuba lelona phupha likhulu kuye wonke umntu ngoku, kodwa kukho iinyani malunga nentengiso yomsebenzi. Kuya kufuneka uyazi ukuba ngaphambi kokuba uhambe. Kweminye imimandla, eli lizwe lijamelene nokunqongophala kwabasebenzi;
Irente kunye nezindlu e-Austria
Disemba 3, 2020 UAntika Kumari Ostriya , izindlu
Izindlu zaseOstriya zineeflethi eziphambili kwizixeko ezikhulu kunye nezindlu zangasese kwiindawo ezinabantu abambalwa. Izindlu zithande ukuba lixabiso eliphezulu kunye nomgangatho. Nangona kunjalo, abafuduki kunye nabangaphambili kufuneka baqaphele ukuba iindawo ezininzi azibonelelwanga xa
Iindleko zokuHamba ukuya eOstriya
Oktobha 20, 2020 UAntika Kumari Ostriya , hamba
Kubiza malini ukuhamba kwaye ujonge iOstriya entle? Ngeholide yakho e-Austria, iindleko zokuhamba zinokuba yi-117 yeedola ngosuku, elixabiso lemihla ngemihla eliqhelekileyo elisekelwe kwinkcitho yeendwendwe zangaphambili. Kwi-avareji,
Iidyunivesithi ezigqibelele e-Austria
Matshi 19, 2020 IShubham Sharma Ostriya , isifundo, hamba
I-Austria, ilizwe elincinci elikhoyo eYurophu kodwa ukugqwesa kwimfundo yaseyunivesithi e-Austria kuyavunywa kwihlabathi liphela. Iidyunivesithi ezininzi kweli lizwe zikwindawo ephezulu kwihlabathi. Eyona nto ilungileyo malunga ne-Austria kukuba imfundo
Februwari 2, 2020 UAntika Kumari Ostriya , impilo
I-Austria ibonelela ngezona ndawo zononophelo lwempilo zibalaseleyo emhlabeni. Kwaye ukufikelela kwiinkonzo zonyango kuthathwa njengokugqibeleleyo ngokwamazwe aphesheya. Amaxabiso aphezulu anyuka kule minyaka idlulileyo. Kwaye indlela efanelekileyo
January 31, 2020 UAntika Kumari Ostriya , isifundo
I-Austria ayifumaneki embindini weYurophu-kodwa ilizwe lidlale indima ebalulekileyo kwimbali yaseYurophu. Zininzi izizathu zokufunda e-Austria, kubandakanya neninzi leeyunivesithi ezikumgangatho ophakathi